🥇 ▷ Sidee looga jawaabayaa wicitaanada lambarrada lama yaqaan ee iPhone-ka leh ee ah 13 ✅
Sidee looga jawaabayaa wicitaanada lambarrada lama yaqaan ee iPhone-ka leh ee ah 13
Imaatinka macruufka 13 kaalay boqolaal muuqaalo cusub iyo Kaliya maaha inaan ugula jeedno si habsami ama qaab codsiyada cusub. Laakiin waxay ku daraan howlo cusub barnaamijyada nidaamka sida ay dhacdo in awood loo yeesho in la aamusiyo wicitaanada lambarrada aan la garaneyn ee ku socda iPhone.
Illaa iyo hada waxaa suurta gashey in la xakameeyo lambaradaas aan go aansanay (inta badan taleefanadaas ganacsi ee aan wici laheyn). Laakiin macruufka 13 wuxuu usocdaa hal talaabo oo dheeri ah iyo wuxuu noo oggolaanayaa inaan aamusno tirooyinkaas oo aannan ku jirin jadwalka xiriirada, inaanan dhawaan soo wicin ama aan soo jeedin Siri (taas micnaheedu waa inaanay ku xirnayn xiriir ka dhexeeya silsiladaha qaarkood, farriimaha ama kuwa kaleba).
Waqtiga loo baahan yahay: 1 daqiiqo.
Telefoonnada ka garaac lambarrada aan la garaneyn ee ku jira iPhone noo oggolaan doona hal mar iska ilow dhammaan wicitaanada “aan habboonayn”, dadka ama shirkadaha aan annaga ka dhaxeynin xiriirkeenna saddex tallaabo oo keliya:
Gali barnaamijyada macruufka ee laga soo galo iPhone-kaaga.
Raadi qaybta taleefanka, halkaas oo aad ku hagaajin karto xulashooyinka iyo dhaqanka iPhone ee wicitaanada (Wicitaanada, xiriirada xiran, gargaarka taleefanka, iwm.).
Tirtirto lambarada aan la aqoon
Ku dadaal ikhtiyaarka ah Tirtirto lambarada aan la aqoon dhammaan nambaradaas oo aanan ku keydin ajandeyaashayada xiriirka ama aan xannibnay.
Dhammaan wicitaannadaas “la sifeeyey” oo aan ka dhawaajinnin iPhone-keena, waxaa toos loogu diri doonaa fariimaha codka (haddii aad shaqeyso) waxaana ka soo muuqan doona liiska wicitaanadii dhawaa. Markaa waan awoodnaa, midkoodna farriinta ay ugu dhaafeen sanduuqa boostada, ama sababta aan u aqoonsanno lambarka, soo celinta wicitaanka markasta oo aan rabno.
Haddii, sidii anaan uga jawaabin wicitaanada lambarada aan la aqoon, qalabkan macruufka ah wuxuu noqon doonaa saaxiibkaaga ugu weyn. Laakiin EYE! in shirkado badani ay isticmaalaan batoonno batoonno ah oo iyaga oo aan haysan inay kaydisaa tirooyinkooda ay sii socon karto